उष्ण प्रदेशीय बागवानी विकास केन्द्रले लिचीको ठेक्का बोलकबोल नगरी मिलेमतोमा ठेक्का दिएको आरोप लगाएको छ ।
प्रिमियमको सेयरमा संस्थालाई बाटो खुला
प्रिमियम मूल्यमा जारी भएको सेयरमा संस्थागत लगानीकर्ताले पनि आवेदन दिन पाउने भएका छन् । ‘धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका ०७४’ संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
जापानमा इलामको चिया
छ वर्षअघि दार्जिलिङको चिया किनेर जापनमा बिक्री गर्ने योजना थियो जापानी नागरिक मएखवा थचुवाको । उति बेला भारत पाकिस्तानबीच कार्गिल क्षेत्रमा युद्ध चलिरहेकाले उनले दार्जिलिङको चियाको खासै अध्ययन गर्न पाएनन् ।
भेरी १ र २ जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर बनाउन सुरु भएको छ । चाइना गेजुवा कम्पनीले ७२१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको भेरी १ र २ को डीपीआर बनाउन सुुरु गरेको हो ।
आगामी वर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्यमा रहेका स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आधा दर्जन समझदारी भएको छ । मंगलबार नयाँदिल्लीस्थित कृषि भवनमा भएको करिब दुई घण्टा छलफलपछि कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल र भारतीय समकक्षी राधामोहन सिंहले ती सझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
विज्ञापन संघ र चौधरी गु्रुपबीच सम्झौता
नेपाल विज्ञापन संघले दसौं कृति अबार्डको टाइटल स्पोन्सरका लागि चौधरी ग्रुपसँग सम्झौता गरेको छ ।
बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याज नबढाउने यसअघिको सहमति तोडिएको एक साता नबित्दै फेरि अर्को ‘भद्र सहमति’ को तयारी भएको छ । सहमति तोडिएको भोलिपल्टबाटै बैंकहरू ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि बैंकर्स संघले यस्तो तयारी गरेको हो ।
टयांकरमा हुने चुहावट रोक्न आयल निगमले लकिङ प्रणाली जडान गरेपछि पोखराका चालकले ढुवानी ठप्प पारेका छन् । लकिङ प्रणालीको विरोधमा उनीहरूले सोमबार इन्धन लोडसमेत गरेनन् । ढुवानी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार रक्सौलमा लोड भएका चार टयांकर सोमबार पोखरा भित्रिए पनि अन्य चालकहरू लोड लिएका छैनन् ।
भारतीय पक्षले मर्मत सम्भारको काम नसक्दा यस वर्ष पनि धान सिजनमा गण्डक नहरमा पानी आउने अनिश्चित बनेको छ । भारतमा अझै नहरको विभिन्न खण्डमा मर्मत सम्भार र निर्माण कार्य जारी नै रहेकाले भारतले पानी दिने/नदिने सम्बन्धमा अनिश्चितता भएको हो ।
‘स्मार्ट सिटीलाई संस्कृति पनि आवश्यक’
नेपालमा मात्रै होइन, विकासको खुडिकलो उक्लिँदै गरेका हरेक देशमा अहिले स्मार्ट सिटीको बहस भइरहेको छ । स्मार्ट सिटी कस्तो हुनुपर्छ ? स्मार्ट सिटी कस्तो हुन्छ ? यसको ठयाक्कै परिभाषा भने कसैसँग छैन ।
स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नेलाई छाडिन्न : मन्त्री
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले दुग्ध पदार्थमा देखिएको मिसावटलगायतको विकृति अन्त्य नभएसम्म अनुगमन जारी रहने बताएका छन् ।